မြေခွေးတို့အကြံ ဒို့တွန်းလှန်မယ် | Ko Rohingya
ဒင်းတို့ ပြောတဲ့၊ စည်းလုံးရေးလား။
This entry was posted on February 6, 2013, in ကဗျာ and tagged ကဗျာ, ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, ဓာတုသိန်းစိန်, ရခိုင်, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သားသတ်သမား, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖုံးကွယ်ထားသော လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး- မြန်မာစာတန်းထိုး	ငါ့နှလုံးသားတွေ တုန်ရီနေတယ် →